Beertone Makorelina Loko Labiera - Famolavolana
Makorelina Loko Labiera
Makorelina Loko Labiera Beertone no torolalana Beer Referina voalohany miorina amin'ny loko labiera samihafa, atolotra amin'ny mpankafy endrika fitaratra. Ho an'ny andiany voalohany dia nanangona fampahalalana avy amin'ny boloky swiss 202 samihafa izahay, mandehandeha manerana ny firenena, hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana, hatrany avaratra ka hatrany atsimo. Ny fotoana iray manontolo dia nandany fotoana be sy ny lojika an-tsipiriany mba ho vita saingy ny valin'ireto firafitra roa ireto dia mahatonga antsika hirehareha ary efa misy ny drafitra efa nomanina. Cheers!
Anaran'ny tetikasa : Beertone, Anaran'ny mpamorona : Alexander Michelbach, Anaran'ny mpanjifa : Beertone.
Hevitra amin'ny endriny
Makorelina Loko Labiera Alexander Michelbach Beertone